Ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ihe n'ọkụ China Flat Shower - Huanyu Sanitary Ware
Home > Ngwaahịa > Ntọala ịsa ahụ > Ntọala ịsa ahụ dị larịị
Ntọala ịsa ahụ dị larịị Ndị nrụpụta
Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited, a elu ọkachamara emeputa & Exporter na China na kemgbe na plastic ahịrị n'ihi na ihe karịrị 20 afọ na na sanitary ware ụlọ ọrụ ihe karịrị 10 afọ, Ọzọkwa. anyị ejirila usoro njikwa njikwa mma ISO 9002S na mbụ nke 1999. anyị na-arụpụta ngwaahịa ya niile na China. Ngwaahịa anyị bụ ahịrị ịdị ọcha nke ngwaahịa anyị gụnyere dị ka ndị a: Isi ịsa ahụ, aka ịsa ahụ, ụgbọ okporo ígwè ihe mmịfe, ihe na-edobe ịsa ahụ, igwe ịsa ahụ, setịpụ ihe ịsa ahụ, bracket ịsa ahụ, ngwa ịsa ahụ, ịsa ahụ Bidet, ngwa ịsa ahụ & ngwa ịsa ahụ yana ahia na ngwa ịdị ọcha ndị ọzọ ngwaahịa na Mere in China Weebụsaịtị.
Ụdị nke setịpụ ịsa ahụ dị larịị bụ ngwakọta nke square na gburugburu. Enwere ike ijikọ ya na ịsa ahụ ọ bụla ma ọ ga-adabara nke ọma. Nhazi chrome-plated nke igwe anaghị agba nchara 201 ga-eme ka ndụ shelf dị ogologo.
Anyị nwere ike ike ịzụlite a dịgasị iche iche nke ọhụrụ ngwaahịa dị iche iche nha na nkọwa na okenye ahịa anyị dị iche iche chọrọ na dị iche iche chọrọ. The elu àgwà ewepụghị ịsa set bụ elu mma, onye ọ bụla technology na àgwà ewepụghị ịsa set bụ elu mmepụta ogbo. Site n'ọhụụ njikwa anyị na ọganihu na-aga n'ihu, ngwaahịa ndị ahụ na-ere nke ọma n'ahịa ụwa, nke nwetara aha ọma. Azụmahịa anyị pụrụ iche na R&D, OEM, ODM.
Ntọala ịsa ahụ nke Square Classic
Square kpochapụwo ịsa ahụ set, imewe nke square okirikiri, na chrome-plated bracket iche na ịgba-ese silver ịsa mkpanaka, ọ mara mma nke ukwuu.
Ntọala ịsa ahụ Classic
Ntọala ịsa ahụ Classic bụ chrome-plated niile. Enwere ike imezi ịdị elu nke ịsa ahụ aka na ọchịchọ. Igwe ịsa ahụ dị n'elu nwere ike ịtụgharị ogo 360 ma ọ masịrị ya.
Ntọala ịsa ahụ nke oge a
Ogidi ịsa ahụ nke usoro ịsa ahụ nke oge a dị okirikiri, na-eji 201 igwe anaghị agba nchara na chrome-plated surface treatment. , Ịsa ahụ aka ya bụ ụdị ntinye otu igodo, dị mfe iji rụọ ọrụ. Enwere ike ịgbanwe akụkụ nke ịsa ahụ n'elu n'amaghị ama.
Zụrụ ngwaahịa sitere na ụlọ ọrụ anyị a na-akpọ Huanyu Sanitary Ware bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebuga Ntọala ịsa ahụ dị larịị na china. Ogo anyị dị elu Ntọala ịsa ahụ dị larịị na-ewu ewu na ndị chọrọ inweta ngwa ahịa dị ọnụ ala. Anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa iji nye ọrụ n'ogbe. Ị nwere ike ijide n'aka ịzụta ọnụ ala dị ala site na ụlọ ọrụ anyị.